အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ အလျားအနံတွေကို တိုင်းတာနိုင်တဲ့ SizeUp –aSmart Tape Measure apk - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Android Application Phone Application အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ အလျားအနံတွေကို တိုင်းတာနိုင်တဲ့ SizeUp –aSmart Tape Measure apk
အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ အလျားအနံတွေကို တိုင်းတာနိုင်တဲ့ SizeUp –aSmart Tape Measure apk
Maung Pauk at 7:51:00 PM Android Application, Phone Application,
သင့်ရဲ့ Android Smatphone ထဲကို ဒီ Application လေးထည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ပေတံတွေ၊ ပေကြိုးတွေ မလိုတော့ပါဘူး.. ဒီ App လေးနဲ့ပဲ အရာဝတ္တုတွေရဲ့ အလျား၊ အနံ၊ အမြင့်၊ အကွာအဝေး တွေကို တိုင်းလို့ရပါတယ်.. ဒီ app လေးကိုဖွင့်.. ကိုယ်တိုင်းချင်တဲ့ ပစ္စည်းရဲ့ အစမှာချ၊ Start ကိုနှိပ်.. တိုင်းတာချင်တဲ့ အကွာအဝေးထိယူသွား. ပြီးရင် Stop ကိုနှိပ်.. အတိုင်းအတာ ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ ပြပေးလိမ့်မယ်.. ယူနစ်ကို စင်တီမီတာ၊ လက်မ ကိုယ်ကြိုက်တာ ထားလို့ရပါတယ်.. သိပ်တော့ အတိအကျကြီးမဟုတ်ဘူး.. ခန့်မှန်းလောက်ပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်.. ဖုန်းအားလုံး Support ပေး၊ မပေးတော့မသိပါဘူး..
သငျ့ရဲ့ Android Smatphone ထဲကို ဒီ Application လေးထညျ့လိုကျပွီဆိုတာနဲ့ ပတေံတှေ၊ ပကွေိုးတှေ မလိုတော့ပါဘူး.. ဒီ App လေးနဲ့ပဲ အရာဝတ်တုတှရေဲ့ အလြား၊ အနံ၊ အမွငျ့၊ အကှာအဝေး တှကေို တိုငျးလို့ရပါတယျ.. ဒီ app လေးကိုဖှငျ့.. ကိုယျတိုငျးခငျြတဲ့ ပစ်စညျးရဲ့ အစမှာခြ၊ Start ကိုနှိပျ.. တိုငျးတာခငျြတဲ့ အကှာအဝေးထိယူသှား. ပွီးရငျ Stop ကိုနှိပျ.. အတိုငျးအတာ ဘယျလောကျရှိတယျဆိုတာ ပွပေးလိမျ့မယျ.. ယူနဈကို စငျတီမီတာ၊ လကျမ ကိုယျကွိုကျတာ ထားလို့ရပါတယျ.. သိပျတော့ အတိအကကြွီးမဟုတျဘူး.. ခနျ့မှနျးလောကျပဲဖွဈမယျထငျတယျ.. ဖုနျးအားလုံး Support ပေး၊ မပေးတော့မသိပါဘူး..
Measure in metric or imperial units - centimeters or inches.
Measure any object - even an entire apartment!
Collect and store historical measurements for future reference.
Share measurements with friends.
High level of accuracy - less than2cm (when measuring objects up to 1.5 meters).
Convert measurements - easily display stored measurements in cm or inches.
Air measurement! No need to slide the phone over the surface. Just place the Phone on one end, pick it up and move it to the other end.
Measurement at all direction both horizontally and vertically!
An easy calibration process to improve accuracy.
Higher accuracy in all directions
Sharing option – share your measurement with friends
Added "Last Result" at the “Result” screen (easily view your last measurement)
SizeUp for free for 30-days!
Download SizeUp –aSmart Tape Measure apk : 10.71 MB